सम्मृद्धितिर लम्किदै चामुण्डाविन्द्रासैनी - मध्य पहाड
सम्मृद्धितिर लम्किदै चामुण्डाविन्द्रासैनी
Posted on ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार २२:१५ - ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार २२:१५ by Madhya Pahad
विकासमा लम्किदै दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको मुकाम जम्बुकाँध बजार । पहिले औला गनिने त्यहाँका पसल संघियतासँगै नगरपालिकाको सदरमुकाम बनेपछि बजार विस्तार भएको छ । शब्द÷तस्वीर ः भक्तबहादुर शाही
दैलेख । जिल्लाकै नेताको उर्वरभुमि मानिन्छ,चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका । प्रतिनिधी सभा सदस्य,प्रदेश सभासदस्य पुर्व माननीय,सभापति,योजना आयोग देखी जिल्लाहुदै केन्द्रिय स्तरका नेता कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा,नेपाली काँगे्रस,नेकपा पार्टीका ठुल ठुला नेता छन् । तिनै नेताबाट दैलेख जिल्लाको राजनिति कतातिर जान्छन भन्ने कुराको छिनोफानो समेत चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाबाटै हुने गर्दछ ।
तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ । नेता भएपनि निति कार्यान्वयन हुन नसक्दा नगरबासीले शान्ती सुरक्षा,दिगो विकासको समेत विगतका दिनमा कल्पना सकेका थिएनन् । चामुण्डाविन्द्रासैनीमा हुने दिनहुँ अपराधिक गतिविधी र कुप्रथा कुरिती र कुसंस्कारले गर्दा निति बनाउने नेता माथि नै प्रश्न आउने गरेको थियो । ‘नेता त हुनुहुन्छ,निति कहिले कार्यान्वयन हुदैन ।’ आफु असल भन्दा पनि सफल कसरी हुने सोचाईले गर्दा जनताका समस्या जिउकात्युँ थिए ।
देशमा संघियता सँगै सिंहदरबार गाउँमा आएपछि नगरबासीले बल्लतल्ल विकासको मुख देख्न पाएका छन् । विकास भन्ने वित्तिकै मुख मिठ्याउने जनता आफ्नो विकास आफै गर्न थालेपछि एकातिर गाउँमा विकास भएको छ भने अर्कोतिर रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेका छन् । भारतको मुग्लान,कालापहाड र खाडीमुलुकमा जाने युवाहरुको संख्यामा कमी आएको छ ।
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय सरकारको तुलनामा विकास निर्माणले चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका अग्रस्थान छ । सक्षम र जनप्रिय नेतृत्वले गर्दा आम नागरिकले सुविस्ता पाएको नगरबासीको भनाई छ । तर विश्वव्यापी फैलिएको कोराना महामारीको समयमा चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले सावधानी अपनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई पुर्णविराम लगाएन । कामले निरन्तरता पाई रहयो । नगरपालिकामा कोरोना महामारीले त्यति प्रभाव परेन । कोरोनाको कारणले कुनै अप्रिय घटना पनि भएको छैन । कोरानासँग सावधानी अपनाउँदै बच्नका लागि नगरपालिकाले २०७६ चैत्र महिनादेखि नै स्वास्थ्यकर्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू तथा नगरका जनप्रतिनिधिका बीचमा बृहत् अन्तरक्रिया गरी कार्ययोजना बनाउँदा जोखिम हटेको नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले बताए । नगरपालिकामा ५० जना स्वयसेवक परिचालन गरि स्वास्थ्य सामाग्री वितरण तथा जनचेतना जगाउन घरदैलो अभियान थाल्यो । जनप्रतिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर परिचालन गरिदा कोरोनाबाट जनताले सर्तकता अपनाए,नगरप्रमुख शाहीले भने । हामीले नगरवासीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले एलोपेथिक र आर्युवेर्दिक औषधीको प्रयोगसँगसँगै योगा र खानपानलाई विशेष ध्यान दिन लगायौं,हामी र हाम्रा नगरबासी सुरक्षित भयौ ।
आउँ खाँउ र लिएर जाउँ
आर्थिक बर्ष ०७६।०७७ मा नगरपालिकाले २२ हजार मेललाई कलमी लगाएर नासपाती बनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गरेका व्याक्तिलाई हटाएर २९ प्रतिशत जंगललाई ४२ प्रतिशत पु¥याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा आठ हजार चिउरीका बोट बृक्षारोपण गरेको छ । जंगललाई हराभरा बनाउन नगरपालिकाले आफ्नै नर्सरी बनाएको छ ।
नगरपालिकाले १ हजार ८०० पिपल वर रोप्ने नितिलाई कार्यान्वयन गर्न १ हजार ५ सय बरपिपलका बोट बृक्षारोपण गरेको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले जनाएको छ । हाम्रो नगरपालिकाले ‘आँऊ, खाँऊ र लिएर जाँऊ’ बृक्षारोपण सँगै अगाडि बढाएको छ । बृक्षारोपण विभिन्न जातका फलफुल रोपिएको छ । ती फलफुलबाट जाम, जेरी, जुस बनाएर बिक्री गरि आर्यआर्जन गर्ने योजना रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा गर्न लायक काम हामीले वन वातावरण गर्न लागेको नगरप्रमुख शाहीको भनाई छ ।
नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि जनताका मात्र होइनन । बोट बिरुवा, पशुपंक्षीका चौकिदार हुन् भन्ने नाराका साथ ‘एक जनप्रतिनिधि एक संरक्षित जङ्गल’ घोषणा गरेर कार्यविधि र ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । छाडा छोड्ने पशुचौपायालाई नियन्त्रण गरि ९० प्रतिशत जति छाडा पशुहरू व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ भने जंगली जनावर र जलचरलाई संरक्षण गर्दै आएको छ ।
एक वडा एक नर्सरीको नीति आत्मसाथ गदै वडा नंं.– १ मा ओखर नर्सरी, वडा नं. –४ मा एवोकाडो नर्सरी, वडा नं.–८ मा सिट्रस जातका कागती लगायत फलफूलको नर्सरी, वडा नं. ७ मा वर, पिपल, चिउरीलगायतका अन्य रैथाने बोट बिरुवाहरूको उत्पादन तथा विक्रि वितरणको भईरहेको छ ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले अन्य ठाउँबाट बोटविरुवा र फलफुल खरिद गरिरहेको बेला चामुण्डाले आफैले नर्सरी बनाएर सार्वजनिक स्थलमा लगाउने र संरक्षण गर्ने गरेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तिलकबहादुर विकले जानकारी दिए । नगरपालिकाले गौरव गर्नुपर्ने थु्रपै काम गरेको छ । एकातिर रोजगारी दिएको छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काममा पनि धमाधम हुदै गएका छन् । नगरपालिकाले नेपालमै आयमूलक जैविकमैत्री हरियाली सडक निर्माणको अवधारणाका साथ अघि बढाएको छ । जङ्गललाई आयमूलक जंगल बनाउन केरा,आँप सडकको छेउछाउमा अम्रिसो डालेघाँस फलफुल लगाएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नगरपालिकाबाट दुध समेत निर्यात हुने गरेको छ,अधिकृत भने । माध्यमिक तहका विद्यालयहरू सबै भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न हुदैछन । रैथाने बिऊ विजनको सङ्कलन केन्द्र बनाई तिनको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नगरपालिका काम सञ्चालन गरेको छ ।
प्रत्येक वडामा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक खोली कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, गर्भवती महिला, नवजात शिशुलाई घरदैलोमा स्वास्थ्य परिक्षण तथा परामर्श दिने काम नगरपालिकाले गरिहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूले घर आँगनमा जडिबुटि लगाउने अभियान समेत सञ्चालन गरिएको वडानं –८ का वडाअध्यक्ष विरबहादुर शाहीले बताए । हामी जनप्रतिनिधीले नगरपालिकाको सभाले निर्णय गरेको कामको कार्यान्वयन अन्र्तगत घर आँगनमा जडीबुटी रोपेका छौं,उनले भने ।
प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरिदै
चुनावताका जनतालाई आश्वासन दिएको प्रतिवद्धता अनुसार नै नगरपालिकामा काम शुरु गरिएको नगरप्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले बताए । नगरपालिकाले वडा कार्यालय र माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा सडक सञ्जाल जोडेको छ । चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना माध्यमिक विद्यालय घोषणा गरिएको छ भने चामुण्डा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ३ वर्षे बाली विज्ञान पढाई सुरु गरिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमै नमुनायोग्य कार्य भइरहेको छ । पाठ्यक्रम र अभिभावक शिक्षामाला निर्माण गरी प्रकाशन गर्ने तयारी भईरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक विद्यालयमा बाल शिक्षा व्यवस्थित गर्ने चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका नै हो । तत्कालिन चुनावताका हामीले हाम्रो घोषणा पत्र अनुसार वडा नं. १ को पुनडाँडा,भोटेको चौतारामा बसपार्क र साँङ्घेतडादेखि पाल्तडा सम्मको सडकलाई नगरको रणनैतिक महत्वको रुपमा लिएकोले काम तिव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ ।संघिय सरकारको सहयोगमा नगरपालिकाले झण्डै १ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । ‘नगरपालिकामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले जस्तो छ त्यस्तो विगतमा थिएन । मदिरा सेवन गरेर र गुण्डागर्दी गर्नेहरूको विगविगी थियो त्यो अहिले शुन्य अवस्थामा झरेको छ । मानिसहरूले शान्तसँग हिँडडुल गर्न र आफ्नो दैनिक कामधन्दा गर्न पाएका छन्,नगरप्रमुख शाहीले थपे । ३२ लाख २८ हजार १९० रकमको लगानीमा नगरपालिका प्रहरी चौकीको पक्की भवन बनाएको छ । भवनमा कार्यालय, व्यारेक र मेश प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसारको कोठाको व्यवस्था छ ।
जिल्लाकै अधिकाँश प्रहरी चौकी भाडामै छन । तर नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको लगानीमा पहिलो पटक प्रहरी चौकीको पक्की भवन निर्माण गरि प्रहरी चौकीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । इन्टरलट इट्टा,कुखुराको दाना उद्योग नगरपालिकामा सञ्चालन छन भने नगरपालिकाबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा दुध समेत निर्यात हुने गरेको छ ।
प्रदेशकै ठुलो नगरपार्क निर्माण
कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो नगर पार्क निर्माण चामुण्डाविन्द्रासैनीमा निर्माणधिन छन । २ सय रोपनीभन्दा बढि क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कको ३ किलोमिटरको पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पार्कको वरिपरि केतुकी,भित्री भागमा कुइयाँसी, गुलाव रोपिएको छ । पार्कलाई नेपालकै मौलिक जैविक पार्कका रूपमा निर्माण गर्ने लागेको नगरपालिका लागि परेको नगरप्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले बताए । साँस्कृतिक आस्थालाई पनि पर्यटक भित्रयाउने उद्देश्यले १ हजार ५२० किलोग्रामको घण्ट र स्थानीय कालिगढबाट ९ फिट अग्ला तरबार बनाईएका छौ,चालु आर्थिक बर्षमा संग्रालय बनाउने काम सम्पन्न लागि लागिपरेका छौं नगरप्रमुख शाहीले थपे ।
त्यसैगरि १५ सैयाको अस्पताल स्वीकृत भई भर्खरै १ करोडको टेण्डर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ सैयाको अस्पतालको घोषणा गरेका थियौं त्यो पुरा भएको छ । हामीले खानेपानीका क्षेत्रमा मुझुवा खानेपानीका अलावा कर्णाली प्रदेशकै ठुलो लिफ्ट खानेपानी आयोजना शुरु गरिएको छ । सो आयोजनामा केही दिन अगाडी नगरपालिकाले खरिद ऐन विपरित गई आफन्तलाई ठेक्का पट्टा दिएको आरोप समेत नगरपालिकाले खेप्नु परेको छ । दाबी विरोध समय नसकिएकोले केही विकास विरोधीहरुले मिडियाबाजी गरेको नगरप्रमुख शाहीको भनाई छ ।
राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्ने मनोविज्ञान नै समस्या हो
राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्ने मनोविज्ञानलाई नगरपालिकाले पहिलो समस्याका रुपमा अगाडी सारेको छ । सिंहदरबार गाउँमा आए पनि अनुभव, साधन, स्रोत, कर्मचारीको अभाव रहेको छ । स्रोत साधन कम छ, जनताका आशा धेरै छन् । स्थानीय तहलाई काम गर्नका लागि ठोस बजेटको कमी छ । तर पनि निराश होइन धेरै पाटाहरू आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छ ।२०४६ देखी यता बहुदल भनेकै बिरोध गर्ने परम्परा एक अर्काबाट सिक्ने र सिकाउने परिणाम अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो नै मुख्य समस्या र चुनौती बनेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारमा १०–१२ करोड बजेट विनियोजित गरेको छ । कोल्ड स्टोर बनाउन १४–१५ करोड खर्च लाग्छ, एउटा बाटो बनाउन अरब रकम लाग्छ, विद्युतिकरणको कामलाई अगाडि बढाउन १०–१५ करोड लाग्छ, अस्पताल बनाउन ८–१० करोड खर्च लाग्छ । नगरबासीको चाहना रकेट स्पिड विकास खोजिरहेको छ भने हामी रेलको गतिमा नहुँदा केही व्याक्तिमा निराशा पनि उत्तिकै छाएको नगरप्रमुख शाहीको भनाई छ ।
जनतालाई हामीले महत्वाकाँक्षी बनाउँदा संयन्त्र, अभ्यास, पद्धतिको विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । यी चुनौतीहरू हुन् तर नेपालीहरूको साथ दिने परम्परा छ । हामीले चालेको अभियानमा पनि जनताले साथ दिएका छन् । यस्ता खालका समस्या र चुनौतीहरू आम रूपमा नेपालमै छन् । समस्याहरू समयक्रमसँगै सुल्झिँदै जाने । निराश होइन धेरै पाटाहरू आशावादी हुने ठाउँ छ । मलाई यो समस्याभन्दा पनि सहजताका साथ काम गरिरहेको महशुस गरिरहेको नगरप्रमुख शाहीको भनाई छ ।
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको मुकाम रहेको मुख्य बजार ।
नगरपालिकामा सन्तुलित विकास भएको नगरपालिकाका जानकार बताउँछन् । कुनै चिजलाई पनि इन्कार गर्न नसकिने हुँदा नगर कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य यातायात,खानेपानी प्राथमिकतामा राखेका नगरबासी रणबहादुर खडकाले बताउनुभयो । सामाजिक कुराहरूभन्दा ब्यक्तिगत कुराहरूलाई महत्व दिने आत्मकेन्द्रित हुने समस्या छ । सार्वजनिक विकास जति भएपनि व्यक्तिगत हिसाबले मानिस केहि पाएन भने केहिपनि भएन भन्छ । गलत कुराको बिरोध गर्ने भन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिले हाबीले गर्दा नगरपालिकाप्रति वितृष्णाका स्वर पनि सुनिन्छन्,खडकाले भने ।
This entry was posted in Breaking, slider, कर्णाली प्रदेश, पर्यटन, मुख्य समाचार, समाचार, समाज and tagged by Madhya Pahad. Bookmark the permalink.
← पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि कर्णालीका १६ गन्तव्य छनोट
निति कार्यान्वयन नहुँदा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन बढ्दो →